[၁/၁၈၊၁၉“ Nagasaki Umaimon Festival 2020in Nagasaki Station” ကျင်းပလိမ့်မည်။ ] လူတိုင်းအတွက်, Hello! "Nagasaki Umaimon Festival 2020 ရှိ Nagasaki ဘူတာ" ကို 1/18 နှင့် 19 တွင် Nagasaki ဘူတာ Kamome Plaza တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ စီရင်စုတွင်စတိုးဆိုင် ၁၇ ခုရှိပြီး Nagasaki Gourmet ၏“ Umaimon” ကိုကမ်းလှမ်းသည်၊ ဥပမာ Kamaboko နှင့်“ Nagasaki Wagyu” ကိုသုံးသည်။ ထီတွင်သင်ပါဝင်နိုင်သည့်နေရာတွင်ပဟေrိပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပလိမ့်မည်။ ...
[ဇိမ်ခံအနုပညာရှင်များ Kyushu သို့“ အခမဲ့အချိန်မှတ်စုစာအုပ်” သွားရန်ခရီးထွက်သည်အသွင်အပြင်သစ်! ] လူတိုင်းအတွက်, Hello! “ Free Time Notebook” တွင်အလုပ်အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ ထိုနေရာတွင်ဇိမ်ခံအနုပညာရှင်များက Kyushu သို့သွားရန်ခရီးထွက်နေသည်! "ဒါကအံ့အားသင့်စရာနဲ့ရယ်မောခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ Kyushu ကိုသွားတဲ့ခရီးပဲ။ " ၈ ယောက်မြောက်အလုပ်ဖြစ်သည်။ "Gourmet of Lonely Gone" ထွက်ပေါ်လာသည့်ဂိမ်းကြောင့်စိန်ခေါ်ခဲ့သော "Shibui Kyushu" ကိုရှာဖွေရန်ခရီးစဉ်! ထို့အပြင်ထူးခြားသောကျော်ကြားသူများကစာလုံးပေါင်း Kyushu ၏ခရီးကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ★အသေးစိတ်အတွက်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ ...
[Event Information | Tsukinami Lecture] “ Tsukinami Lecture” သည်မနက်ဖြန်နောက်နေ့ (၃/၁၈၊ စနေနေ့) မှဟောပြောခန်းတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကစုဆောင်းခြင်း / ချိတ်ဆက်မှုတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော“ Fukuoka City Art Museum at Akira Akira Watching” ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုစဉ်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုများသည်ယနေ့ခေတ်အလင်းရောင်၏တိုးတက်မှုနှင့်ချဲ့ထွင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပမာများကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ရှုထောင့်ကနေ။ နားထောင်ခြင်းအခမဲ့။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ (↑ 510 ↑) ● Tsukinami သင်တန်း ...
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ ဒီညမနက်မင်းလည်းအေးတယ်။ အပူချိန်က ၄ ဒီဂရီဖြစ်ပေမဲ့လေတိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်လက်ချောင်းတွေကလက်အိတ်တွေနဲ့တောင်နာကျင်တယ်။ Kamojima တွင်ညဥ့်နက်စွာနေထိုင်သော cormorants များသည်ပုံမှန်အတိုင်းသူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအခက်များနှင့်အတူနံနက်ခင်း၌ပြင်ဆင်နေသည်။ ယခု မှစ၍ ဟားခါးပင်လယ်အော်သို့တစ်လျှောက်လုံးပျံသန်းတော့မည်ဖြစ်သည်။ ပင်စင်တွင်နေထိုင်သူများအဖို့ဤအချိန်သည်အခွန်ရှင်းတမ်းကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါသလား။ ...
[Uminonakamichi လူငယ်ပင်လယ်အိမ်မှကြေငြာချက်1] Fukuoka City Uminonakamichi လူငယ်ပင်လယ်အိမ်မှအဖြစ်အပျက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၏သတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ မတ်လ ၇ ရက်မှ ၈ ရက်နေ့အထိ (၂ ရက်နှင့်တစ်ည) ကျွန်ုပ်တို့သည်“ Uminoie Challenge Camp” ပွဲကိုကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ကမ်းခြေသို့အဏ္ဏဝါအပျက်အစီးများမှတစ်ဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုစဉ်းစားပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ပင်လယ်ကမ်းခြေပင်မစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ ...